JW.ORG का भिडियोहरूले दक्षिण कोरियाका विद्यार्थीहरूलाई मदत गऱ्यो
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली (जिम्बावे) एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
दक्षिण कोरियाको उच्च माध्यामिक विद्यालयकी सल्लाहकार सुजुङले आफ्नो कक्षामा jw.org मा पाइने भिडियोहरू देखाइन्‌। तिनी यसो भन्छिन्‌: “साँचो मित्र कसलाई भन्न सकिन्छ? भन्ने भिडियो देखाउँदा विद्यार्थीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया देखाए। भिडियो हेरेपछि तिनीहरूले यसो भने: ‘मित्रताबारे यसरी सोचेकै थिइनँ। भिडियोबाट सिकाउने तरिका एकदमै नयाँ लाग्यो!’ कसै-कसैले चाहिं सल्लाह चाहियो भने यो वेबसाइट हेर्छु भने।” सुजुङ अझ यसो भन्छिन्‌: “अरू शिक्षकहरूलाई पनि यस भिडियोबारे बताएँ। आफ्नो कक्षामा यस्तो राम्रो भिडियोहरू देखाउन पाएकोमा तिनीहरू निकै खुसी छन्‌।”
कसैले दादागिरी देखाउँदा के गर्ने? भन्ने भिडियोले पनि दक्षिण कोरियाका विद्यार्थीहरूलाई मदत पुऱ्याएको छ। युवा हिंसा रोकथाम संस्थाकी शिक्षिकाले विद्यार्थीहरूलाई यो भिडियो देखाइन्‌। तिनी यसो भन्छिन्‌: “यो भिडियोको कार्टुन चित्रहरू राम्रो भएकोले थुप्रै केटाकेटीले मन पराए। यसमा व्यावहारिक कुराहरू पनि सिकाइएको छ। हिंसाको सामना कसरी गर्ने भनेर मात्र होइन, यसदेखि कसरी जोगिने भनेर पनि सिकाइएको छ।” यस संस्थाले हिंसा रोकथामको लागि विभिन्न प्राथमिक र माध्यामिक विद्यालयमा यो भिडियो देखाउने अनुमति माग्यो अनि स्वीकृति पनि पायो। प्रहरीहरूले पनि jw.org का भिडियोहरू प्रयोग गरिरहेका छन्‌।
तपाईंले अहिलेसम्म यो वेबसाइट हेर्नुभएको छैन भने एक चोटि हेरे कसो होला? यो वेबसाइट चलाउन सजिलो छ। यसमा पाइने बाइबल, अडियो, भिडियो अनि अन्य थुप्रै प्रकाशन निश्शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। (g16-E No. 5)